ရုရှားနိုင်ငံတကာ ယဉ်ကျေးမှုပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ရွှေတံဆိပ်ဆုရလာတဲ့ အောင်သော်ရဲ့သမီး ဂျူးဂျူးသော် - VPS - Shweman Online Media
admin | August 14, 2019 | News | No Comments
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လထဲတုန်းက Russiaနိုင်ငံ Vladivostokမြို့Okean Center မှာကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ Children of The World 2019 ကို ကျင်းပခဲ့ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ။ အဲ့ဒီလို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ နိုင်ငံတွေထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံကလည်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုသွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့က ရွှေတံဆိပ်ဆုတွေကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တယ် ဆိုပြီး သိရပါတယ်။ အခု သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ အထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ လူရွှင်တော် အောင်သော်ရဲ့ သမီး ဂျူးဂျူးသော် က ဆုရတဲ့အပေါ်ကခံစားချက်တွေကို Cele ရပ်ကွက်နဲ့အင်တာဗျုးတစ်ခုမှာပြောပြသွားပါတယ်။
သူပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောချင်လွန်းလို့ ပရိသတ်ကြီးသိအောင် ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အမြင့်ဆုံးရွှေသုံးဆုပေးတာ နှစ်ဆုရခဲ့တာ ဟိုမှာပင်တော့ပင်ပန်းတယ် မနက်ဆိုရင် ၇နာရီလောက်ထရတယ် ညဆိုရင်လည်း ၉နာရီ ၁၀နာရီကျော်လောက်မှ အိပ်ရတယ် ။ ဟိုမှာကျတော့ တော်တော်နဲ့နေမဝင်ဘူးလေ ၉နာရီလောက်မှ နေဝင်တာ ၈နာရီလောက်ထိလင်းထိန်နေတုန်းပဲ ။
၁၀နာရီကျော်လောက်ပေ့ါ အဲ့ဒီကျမှ အိပ်ရတယ် ။ အတီးနဲ့အက ပြိုင်တာ အတီးနဲ့ အကနဲ့ရတာ ။ မြန်မာက ပြိုင်တာ Welcome to Myanmar ပါတယ် ။ ဦးရွှေရိုးနဲ့ဒေါ်မိုးပါတယ် ကိုကြီးကျော်ပါတယ် ပြီးတော့ မော်ဒန်ကိုဒီယိုဂရပ်ဖီရယ် ။ အပျော်လွန်ပြီးမေ့သွားတာ ဘာတွေရခဲ့တယ်ဆိုတာ ။
အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးစိတ်ခံစားချက်ကို “ လုပ်ချင်တာက များနေတော့ ဖြစ်ချင်တာထက် ဖြစ်နိုင်တာများနေတာပေါ့ ။ ဖြစ်ချင်တာထက် ဖြစ်သင့်တာကို ဦးစားပေးရတာပေါ့ ။
သရုပ်ဆောင်လည်း ဝါသနာပါတယ် ဒါပေမယ့် ဖြစ်ချင်တာထက် လုပ်တိုင်းဖြစ်မှလေ ဟုတ်တယ်မလား ။ ဘယ်လောက်ပဲ ဝါသနာပါပါ ဆန်းဆိုတာလည်း ရှိသေးတယ်လေ အဲ့ဒါကြောင့်မို့”ဆိုပြီးပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။
ကျိုက်မရောမြို့တွင် ရေဘေးဒုက္ခသည် ခြောက်သောင်းကျော်အထိ ရှိနေ …
မြောက်ပိုင်း ၃ ဖွဲ့တို့ရဲ့ အကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရပ်ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိခိုက်တယ်လို့ ဦးဇော်ဌေး ပြော …
ယောကျာ်းတွေကိုစိတ်နာ ဒီနေရာကို အတွဲလာ ကွဲစေ ဆိုတဲ့ကျိန်စာ (သို့ မဟုတ်) မိန်းမရဲ တောင်တော် သခင်မ သမိုင်းအကြောင်း…
သဲဖြူကုန်းမြေပြိုမှုတွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သူများကို အိမ်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ထူထောင်ပေးပါမည် …
ထားရစ်သွားတဲ့ ချစ်သူနောက်ကို အမီပြေးလိုက်ရင်း အမောဆို့ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ သူ …
ဗုဒ္ဓဘာသာ မဖြစ်ခင် ဘာသာမဲ့ဘဝ (၁၀) နှစ်တိတိဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အောင်လ ….
မရှိတဲ့ကြားကနေ ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက် အဝတ်အထည်အသစ်စက်စက်တွေ လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ ဦးမန်းဝင်း ….
ကားကြုံလိုက်လာသော ကျောင်းသား/သူ (၃) ဦးကို မဖွယ်မရာပြုလုပ်ပြသည့် ယာဉ်မောင်းအား ဖမ်းဆီးအရေးယူ ….
ပျားရည်သောက်ရန် သင့်တော်သူများနှင့် မသင့်တော်သူများ …